Warbixin: Maamulayaasha Guud ee 68% MAYA JOOGNIMO Joogitaanka Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Maamulayaasha shirkadda Fortune 500 waxay yiraahdaan in baraha bulshada ay gacan ka geysato qaabeynta muuqaalka shirkadda, dhisidda xiriirka shaqaalaha iyo warbaahinta iyo in shirkadda laga helo weji bini aadam. Waa wax lala yaabo, markaa, in a warbixin cusub oo ka socota agaasimeyaasha CEO.com iyo DOMO waxay ogaadeen in 68% Agaasimayaasha guud aysan haba yaraatee joogin baraha bulshada!
Markii aan ka shaqeynayey shirkadaha shirkadaha, caqabadda ugu weyn ee na soo food saartay waxay ahayd in aan la socodsiinno diiradda shirkadda, yoolalka iyo dhaqanka laga soo bilaabo agaasimaha guud illaa maamulka illaa qof walba iyo shaqaale kasta. Maamulayaasha badankood waxay lahaayeen siyaasadaha albaabka furan, laakiin ma jiro qof shaqaale ah oo ku dhiiraday inuu ka gudbo madaxa maamulka oo uu qatar u yeesho cawaaqib xumo siyaasadeed oo ka timaadda albaabkaas. Marka, Agaasimayaasha guud ayaa qori lahaa socodka - Waqti loo qoondeeyey inaad ku dhex socoto shirkadda oo aad shaqsi ahaan ula hadasho shaqaalaha.
Hawlgalladani waxay had iyo jeer ahaayeen kuwa indhaha u furaya hoggaankeenna, in kastoo. Daqiiqado yar oo lahadlaya in shaqaaluhu wuxuu si caadi ah u furi lahaa albaabka hagaajinta nidaamka shirkadda, dhaqankooda, ama aragtidooda guud ahaan.
Waxaan u maleynayaa inay runtii tahay wax aad u dhib badan in agaasimayaasha guud aysan u gudbin warbaahinta bulshada sababahan awgood. Agaasimayaasha guud labaduba way wadaagi karaan, raaci karaan isla markaana wada xiriiri karaan dhammaan qaybaha maamulka isla markaana ka heli karaan sawir cad oo ku saabsan sida wanaagsan ee shirkadahahoodu uga jawaabayaan jihooyinkooda ama hoggaankooda. Jaahwareerku ma awoodi doono inuu sii fido oo uu u sii dulqaato haddii aan goor hore la aqoonsan. Tani waxay u horseedi kartaa qanacsanaanta shaqaalaha - taas oo had iyo jeer keenta qanacsanaanta macmiilka.
Haddii aad tahay agaasime guud maahan warbaahinta bulshada - u gudbi iyaga soo dejiso Warbixinta Maamulaha Bulshada ee 2014 dabadoodana halkaas ka soo bixi. Mar dambe ayey kaaga mahadcelin doonaan… laga yaabee barta Twitter-ka.
Tags: CEOceo.comlacag cnndomoFacebookgoogle +InstagramLinkedInbulshada ceowarbaahinta bulshadaTwitter